Izinzuzo Zokuhweba Forex | Ukuhweba kwe-ECN Forex Izinzuzo nge-FXCC
Ikhaya / Mayelana / Kungani FXCC
Kungani FXCC? Nakhu ..
Kuningi labathengi embonini yethu abafuna ibhizinisi lakho. Ngakho-ke yini ehlukanisa i-FXCC nakwezinye izindawo, kungani sizibheka njengento engcono kakhulu? Kungani kufanele uhwebe ngathi, kunokuba nomunye umthengisi? Yini eyenza sikhetheke?
Akudingeki ukuba ube nenetha eliphakeme kakhulu umuntu ngamunye ukuze abone umehluko we-FXCC, sinombono ku-FXCC; "Izihlahla ezinkulu ze-oki zikhula kusuka ezincane ezincane". Siyisebenzisa ngoba sibone amaklayenti amaningi, abaye bathengisa nathi kusukela ekuqaleni kwethu, bakhula nathi ukuba babe abathengisi abahlukile.
Ngakho-ke siyojabula ukukusiza ngezifiso zakho, noma ngabe iyiphi ingxenye yomjikelezo wokukhula okwamanje. Yini okusha kuya kokuhweba? Siyakwamukela, ake siqale. Uchwepheshe onolwazi? Sicabanga ukuthi sinokuthile kuwe, iphuzu langempela lokwahlukana ukukubonisa.
Siphinde simele ngemuva kwesiqubulo sethu sokuba "umdayisi ohlangothini lwakho". Kodwa thina "sisehlangothini lwakho" kanjani? Okokuqala, sifuna ukuthi uphumelele, sidinga ukuthi uphumelele futhi uthuthukise futhi uthuthukise amakhono akho njengomthengisi. Kunengqondo ngempela uma ucabanga ngakho. Abathengi abaphumelelayo, abanolwazi, abanamakhono abadayisi abajabulayo. Uma uphumelela khona-ke uzoqhubeka nokuhweba nathi futhi ujabulele zonke izinsizakalo okufanele sinikele ngazo.
Okokuqala saqala ukuhweba njengomthengisi we-forex olula, oqondile futhi njengoba sesifinyelele emigqumeni eminingi yethu yokukhula, sesiye sakhula ngokuba ngcono. Njengoba ubuchwepheshe embonini yethu buqhubekele phambili ngesivinini esisheshayo, samukele futhi sibe senhliziyweni yazo zonke izentuthuko zezobuchwepheshe, ukuqinisekisa ukuthi siye sahlala ekugcineni kwemboni yethu. Manje sesisungule idumela elihle, esisekelwe ngenhloso yethu yangempela yokunciphisa inqubo yokuhweba, ngenkathi sibeka ukunakekelwa kwamakhasimende phambili ebhizinisini lethu. Siphatha ngamunye nomthengi ngamunye ngokuhlonipha okukhulu nokucabangela.
Singakusiza uphumelele ngokuhlinzeka ngokuhweba ngokucacile nokuphathwa ngokukhululekile ukuze uhwebe; imiyalo yakho iya ngqo emakethe futhi iyafana, ayikho ukuphazamiseka kwedeski. Ukusebenzisa imodeli yethu ye-ECN / STP kuqinisekisa ukuthi ufinyelela emakethe ngokushesha njengoba ubuchwepheshe bamanje bungavumela. Uzothola izingcaphuno ezingcono kakhulu futhi ugcwalise imakethe kungakhipha, ngendlela enhle futhi evulekile ngangokunokwenzeka.
Siphinde sikusize ukuba uthuthuke njengabahwebi ngokunikeza ukwaziswa kokuqala kocwaningo. Akuzona izihloko ezijwayelekile ezihlanganisiwe nezinombolo eziningi ezididekayo, ngokuvamile ezihanjiswe njengengqondo elandelayo, oyothola enikezwe abanye abathengi. Kodwa ucatshangelwe ngokucophelela, ulwazi olufanele futhi olunemininingwane, ukusiza ukusiza ukwenza izinqumo.
Singabantu isevisi kuphela yokubulawa. ECN Forex Abadayisi bazuza ezinkokhweni ezincane ngokuthengiselana. Ukuphakama kwamanani okuhweba amaklayenti abadayisi abadala, ukuphakama kwenzuzo yomdayisi. Ukuthola i-oda lakho emakethe futhi i-oda ligcwaliswe ngokushesha ngangokunokwenzeka, yinhloso yethu eqondile kanye nomsebenzi wethu.
Ngakho-ke unakho; mayelana nathi isingeniso okufana nokuthi: kucacile, kufinyeleleka futhi kunembile njengoba isevisi ngayinye esihlinzeka ngamakhasimende ethu. Kungenzeka ukuthi uzame okunye okunye, kungani ungasivumeli ithuba lokubonisa ukuthi kungani sicabanga ukuthi singcono kakhulu?